About Us - Qinyang Xianfeng Insulating Co., Ltd
Qinyang Xianfeng Insulation Material Plant iri rakaumbwa muna 1994. Tiri specialized pakuburitswa, kutengeswa uye basa kuputira zvinhu. Vachikwanisa wegore anofukidza 10000 arşive matani zvibereko yemagetsi zvinoumba zvinhu uye mabhiriyoni kuputira ruoko. Dupont Company hwedu yendarama nokutengesa Nomex mbishi zvinhu. Mumakore akawanda kukura, hatina muridzi mukuru Michina kudzora zvokushandisa producting yepamusoro maviri, matatu nemana rukoko ematongerwo zvinhu.
dzedu huru zvigadzirwa vari Pioneer muchiso insulating zvinhu pamwe yepamusoro uye zvakanakisisa basa, kusanganisira yemagetsi insulating rinoumba bepa dzakatevedzana uye insulating ruoko dzakatevedzana.
Electrical tefa rinoumba insulating bepa dzakatevedzana: 6640NMN, 6650NHN, 6641 F CLASS DMD, 6630 DMD.
Insulating ruoko dzakatevedzana: 2715 Washington City Offices insulating ruoko, silicone insulating ruoko.
fekitari Our muridzi ISO9001: 2000 vaipupurirwa Quality System. zvigadzirwa edu certificated kubudikidza Ul pamusoro USA uye ROHS kubudikidza Euro Union. The Pioneer Brand iri paakavapa akakurumbira muchiso kubudikidza Henan Government. Tinowanawo High Quality Product menduru, Advance Enterprise menduru kubva Henan Government.
Mudzimba musika, tine vanopfuura 200 vatengi. Tiri-yakareba (makore anopfuura 15) yendarama nokutengesa Xi'an Sima Motor Co., Ltd., Wolong Electric Nanyang kuputika Protection Co., Ltd., Lanzhou Motor Co., Ltd. All pamusoro nyika, zvinhu zvedu Anonyanyowanika aivigirwa kuna United States, European Union, Middle East, Southeast Asia, Africa, uye kong etc.
Qinyang Xianfeng Insulating Matearial Factory nomwoyo tariro kumisa bhizimisi ukama newe uye vachigamuchira vatengi zvepachokwadi kubva pamusoro nyika kushanyira fekitari yedu!